Kwi-Umbria entle, ukujula kwelitye ukusuka eCascia naseNorcia, iholide egqibeleleyo ikulindile. Indawo efanelekileyo yeholide yokuphumla, ukutya okunencasa kunye nemisebenzi yezemidlalo, indlu yam yokuzimela ilungile kwiholide kunye nabahlobo bakho ngamatheko (imihla yokuzalwa, u-Eva woNyaka oMtsha, iholide yaphakathi ku-Agasti, i-Ista kunye neKrisimesi), impelaveki kunye nosana lwakho okanye ukuba ufuna ukuchitha iholide eyahlukileyo kwenye yezona ndawo zinomdla zase-italy.
Indawo entle eAvendita, kufutshane neValnerina, ecaleni kwendlela esuka eCascia ukuya eNorcia.
Indawo efanelekileyo yeeholide kunye nabahlobo bakho, amatheko (imihla yokuzalwa, iholide yehlobo, uBusuku bangaphambi koNyaka oMtsha, i-Ista, kunye neKrisimesi), okanye ukuba ufuna ukuchitha impelaveki epholileyo ufumanisa i-Umbria eluhlaza.
Yenziwe yala maxesha kwaye inencasa, le ndlu inokungena abantu abayi-10, ineholo enkulu yokungena, ikhitshi elinendawo yomlilo, igumbi lokuhlala elikhulu neliqaqambileyo elinebhedi yesofa, igumbi lokuhlambela elineshawa, amagumbi okulala ama-3 (ambini kabini), kunye nebalcony.
Inegumbi lokuzilibazisa elinefoosball (ibhola ekhatywayo), indawo yokupaka, kunye negadi egcinwe kakuhle enebarbecue, iparasol, itafile kunye nezitulo kunye nebala lokudlala labantwana.
- Thatha uhambo okanye umjikelo uye "Le Quercie" yiya kwi-kart track apho wena kunye nabantwana bakho ninokonwabela kwi-go-karts, iiminibikes njl njl ... ujikelezwe buhlaza baseValnerina.
-Ichibi elihle lokuqubha likumgama oyikhilomitha enye kuphela, kwaye iindlela zokuhamba ngebhayisekile zilindele abo bathanda ibhayisekile.
Ezinye iindawo ekunokufikelelwa kuzo ngokulula nezifanele ukutyelelwa zezi:
IAssisi, kunye neBasilica yayo enomdla yaseSt. Francis (1h);
Iingxangxasi zaseMarmore (imizuzu engama-40);
Forche Canapine (40'') yabatyibilizi.
ICastelluccio (1h) yeparagliding.
Ndwendwela ezi ndawo kwaye emva koko ubuyele e-Avendita kwaye wonwabele umoya wobuhlobo kunye nokuzola.
Utyelelo lwenkcubeko lufaneleke kakhulu ebusika, kodwa kukho iminyhadala, iintsomi, iziganeko zeKrisimesi ezifana nokuzalwa okuphilayo kokubini e-Avendita nakwiidolophu ezikufutshane.
Abasebenzi bethu bayafumaneka kulo naluphi na ulwazi kunye nexesha lokuhlala kwakho.
Ndiyathanda ukuphatha iindwendwe zethu njengoko sithanda ukuphathwa ngexesha lohambo lwethu, ke siya kukukhathalela!